Isalfure eMnyama, i-2-Amino-4-Nitrophenol, iSalfure eMnyama i-BR-yeQela
Isityalo sethu sinendlela ephezulu yokuvelisa iSalfure Emnyama B, iSalfure Emnyama BR, 2, 4-Dinitrochlorobenzene kunye ne-2-Amino-4-nitrophenol.
Iflake emnyama emnyama okanye iinkozo ezinamandla ahlukeneyo. Idaya ikakhulu kusetyenziswa umqhaphu, viscose, IVinylon kunye nephepha.
Umthunzi owahlukileyo onesalfure emnyama BR.
Mthubi mthubi ukuya kumbala omnyama okhazimlayo. Ukwenza iidayi, i-pesticide kunye neyeza eziphakathi.
Yikristale emthubi, umgubo. Ukwenza iidayi kunye namayeza aphakathi. Isetyenziswa ikakhulu kwi-asidi ye-asidi RH, i-asidi eluhlaza ye-asidi, i-Black BL, i-BRL, i-BGL.
Foring Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd. yasekwa ngo-2004 Inkampani yethu ifumene i-ISO 9001: 2006 kunye ne-ISO 14000. Siye saqokelela amava atyebileyo okuthumela ngaphandle iimveliso zechemical zase China. Ngokusekwe kwisityalo esinamandla, siyakwazi ukuxhasa iSulphur eMnyama kunye nabaphakathi bayo kwintengiso yaphesheya.
Iimpawu ezintle zokukhawuleza, ukusebenza kweendleko kunye nokwenza lula kokusebenza phantsi kweemeko ezahlukeneyo zokulungisa, ukuqhubeka okuqhubekayo kunye nokuqhubekayo kuyenze ibe yenye yezona zinto zidume kakhulu.
Idaya ikakhulu kusetyenziswa umqhaphu, viscose, IVinylon kunye nephepha.